ယင်း App ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းမရှိဘဲ migme အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အီးမေးလ်ပို့ရန် & Messaging ကို လမ်းညွှန်များ & ကျူတိုရီရယ်
တစ်ဒေါင်းလုပ်မပါဘဲ Access ကို migme
03 ၏ 01
Mig33 အခုတော့ migme အဖြစ်လူသိများသည်
migme ဝဘ်ဘရောက်ဇာအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မိုဘိုင်း app ကနေတဆင့်သုံးနိုင်တယ်။ migme
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်း 65 ကျော်လူတို့နှင့်အတူ chat ရန် option ရှိသည်ဖို့လိုပါသလား? ထိုအခါ migme, United States မှာရရှိနိုင်စဉ်အဓိကအားအရှေ့တောင်အာရှ, တောင်အာရှ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိကအတွက်ပရိသတ်တွေတာဝန်ထမ်းဆောင်သော။ တစ်ဦးကို chat application ကိုထုတ်စစ်ဆေး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်သင့်အားဖွင့်အပြင်, Migme လည်း, သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးပုံပြင်များကိုဝင်ရောက်ချက်တင်ခန်းတွင်ပါဝင်ရန်နှင့်ရေဒီယို station migme ကိုနားထောင်ဖို့ option ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ migme များအတွက်မူလတန်းပရိသတ်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအချို့ကိုသင်အကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရရှိနိုင်မဟုတျပါကွောငျးတှေ့နိုငျတယျ, သတင်းအချို့နှင့်ဖျော်ဖြေရေးအကြောင်းအရာတစ်ခုကနိုင်ငံတကာပရိသတ်အတွက်ရန်ကု သ. မရသောကြောင့်, အချို့အကြောင်းအရာများအင်္ဂလိပ်လိုမရရှိနိုင်ပါ။
တစ်ဘက်မှတ်စုအဖြစ်, migme တစ်ချိန်က Mig33 အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ ဒီ app 2014 ခုနှစ်နာမည်ပြောင်းလဲနှင့်အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
migme တစ်ခုက Android နှင့် iOS စမတ်ဖုန်းများအတွက် app ကိုအဖြစ်လျော့နည်းခေတ်မီအဖြစ်ရရှိနိုင်ပေမယ့် "အင်္ဂါရပ်ဖုန်းများ," migme လည်းသင်၏ဝဘ်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် browser ကို, လက်ပ်တော့, ဒါမှမဟုတ်မိုဘိုင်း device အတွက်ရရှိနိုင်မှန်သည်။
03 ၏ 02
ညာဘက်တစ်ဦးက Web Browser ကိုအတွက် migme ကိုသုံးပါ
migme တစ်ဦးကို browser ကနေတစ်ဆင့်တစ်ဦးကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device တစ်ခုခုကနေတဆင့်သုံးနိုင်တယ်။ migme
ဤတွင်ညာဘက်ဝဘ်ဘရောက်ဇာထဲမှာ migme သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုဖွင့်:
သင်သည်သင်၏ desktop ပေါ်မှာ, လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်အောက်ပါ web browsers တွေထဲကတစ်ခုရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ:
Google Chrome က
က Internet Explorer (ဗားရှင်း 10 သို့မဟုတ်အထက်)
သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ပါနှင့်လိပ်စာဘားသို့ "mig.me" တွင်ရိုက်ထည့်, ဒါမှမဟုတ်ဒီ link ကို click, နှင့်ပြန်လာ key ကို click နှိပ်သို့မဟုတ်ထိပုတ်ပါ။
ရလဒ်စာမျက်နှာတွင်, သငျသညျကို log in ထို option ရှိသည်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ username နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သငျသညျသေးတစ် migme အကောင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, သင် options နှစ်ခုမှရွေးချယ်နိုင်သည်
သင်သည်သင်၏ Facebook မှာ username နဲ့ password ကိုသုံးပြီး migme မှပေါ်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ Facebook ကအတူလက်မှတ်ထိုးရန်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါသို့မဟုတ်ထိပုတ်ပါ။
သင်တို့သည်လည်း migme အပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုအကောင့်ကိုဖန်တီးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မ "အခုဆိုရင် Up Sign 'ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါသို့မဟုတ်ထိပုတ်ပါ, သင်၏အကောင့်သစ်ဖွင့်လှစ်ဖို့ညွန်ပြချက်များကိုလိုက်နာရန်
03 ၏ 03
မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ migme တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမိတ်ဆွေများကိုရှာတွေ့မှပျော်စရာ options အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ migme
သငျသညျ migme logged in ဝင်သောကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်က chat မှမိတ်ဆွေများကိုတွေ့ရှိရန်လွယ်ကူသည်။
မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်တစ်ဦး menu ကိုဖော်ထုတ်ထိပ်မှာရှာဖွေရေးအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။ မီနူးရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်တွင် "လူတွေက" link ကိုထိပုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အတူ chat ဖို့လူရှာတွေ့ဖို့နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးနှင့်အတူတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ သင်, Facebook ကသူငယ်ချင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်သင်၏ဖုန်းအဆက်အသွယ်ကနေသူငယ်ချင်းများကို add, မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုရှာဖွေတဲ့ QR ကုဒ်ကိုအသုံးပြုကျပန်းမှာတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းဖို့ရှေးခယျြ, ပင် closeby နေသောသူငယ်ချင်းများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတွင်, ထို့နောက်ရလဒ်စာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးမှ scroll နှငျ့ "ပိုပြည်သူ့ Find" link ကို click နှိပ်ပြီးစာမျက်နှာ၏ထိပ်မှာရှာဖွေရေးအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် Facebook ကသူငယ်ချင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်ရန်နှင့်ကျပန်းမှာမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြည့်ဆည်းရန်ထို option ကိုရပါလိမ့်မယ်။
Christina Michelle Bailey, 8/29/16 အားဖြင့်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်
POP ကိုသို့မဟုတ် IMAP မှတဆင့်သင့်ရဲ့ AIM Mail ကိုအကောင့်ကိုရယူရန်လုပ်နည်း
ဘယ်လို Yahoo! နှင့်အတူလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ Send မှ စာပို့
Yahoo! အပေါ်အသုံးပြုသူများ Block လုပ်နည်း messenger ကို
ဘယ်လို ProtonMail Tor ကို Access ကိုအခမဲ့အီးမေးလ်လုံလုံခြုံခြုံနှင့်အမည်မသိကို
AIM Mail ကိုသို့မဟုတ် AOL Mail ကိုတစ်ဦး Chat ကိုကူးယူထားသောမှတ်တမ်း Save လုပ်နည်း
IPhone အတွက် Facebook မှာ Messenger ကို Chat ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
လွယ်ကူစွာတစ်ဦးမေ့လျော့ AOL Mail ကို Password ကို Recover ဖို့သင်ယူပါ
သင့်ရဲ့ Yahoo က Messenger ကိုဆက်သွယ်ရန်စီမံခန့်ခွဲ
AIM Mail ကိုသို့မဟုတ် AOL Mail ကိုအတွက်ပုံမှန်မေးလ်စာလုံးပြောင်းနည်း Learn
အိုင်ပက်ရှိသည် GPS စနစ်ပါသလား က GPS စက်ပစ္စည်းအဖြစ် function နိုင်သလား?
OpenOffice Extensions Install လုပ်ပြီးအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
2018 ခုနှစ်တွင် Buy ဖို့ 14 အကောင်းဆုံး Android ကိုမှုများ
HTML ကိုအယ်ဒီတာများနဲ့ Web Page ကိုအယ်ဒီတာများ
ပို Twitter ကိုနောက်လိုက် Get ရန်နည်းလမ်းများ
ရံဖန်ရံခါအသုံးပြု Formats6အခမဲ့ File Converter
Google App Engine ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးက Web App ကိုနေရာချမှတ်ပေးပါလုပ်နည်း
Browser ကို-အခြေခံပြီး Tools များနှင့် Applications ကိုအဘယျသို့ဖြစ်ပါသလား
ထိပ်တန်း 20 အကြိုက်ဆုံးအခမဲ့ခရစ္စမတ်အီးမေးလ်စာရေးကိရိယာ Downloads
သင်သိသင့်သ 11 လူသိနည်းသော Google Search ကိုလှည့်ကွက်
Multi-Touch ကို: touch-screen နည်းပညာ၏အဓိပ္ပာယ်
Hexdump - Linux ကိုစစ်ဌာနချုပ် - Unix စစ်ဌာနချုပ်
MyEmail.com - POP နဲ့ IMAP အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုမှ Web ကို Access ကို
အဆိုပါ9အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းနားကြပ် 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ
Kindle Software များ Update ကိုဗားရှင်း 3.1
McAfee က LiveSafe
သင့်ရဲ့ Apple က TV ကိုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းများ၏ထိန်းချုပ်ရေးကိုယူလုပ်နည်း
Mac OS X ကို 1.10.4 များအတွက် Google Notifier - ဂျီမေးလ်မေးလ် Checker
Google ကပြက္ခဒိန် Tasks ကိုထည့်သွင်းနည်း